Nandrolone phenylpropionate powde vs Nandrolone Decanoate အမှုန့်
/ဘ‌‌လော့ခ်/nandrolone decanoate , Nandrolone Phenylpropionate/Nandrolone phenylpropionate powde vs Nandrolone Decanoate အမှုန့်
အပေါ် Posted 04 / 05 / 2018 by ၏ ရေးသားခဲ့သည် nandrolone decanoate, Nandrolone Phenylpropionate.
ဘာဖြစ်သလဲ Nandrolone Decanoate အမှုန့်(Deca)?
Nandrolone Decanoate ပုတီးရွိုက်ဟော်မုန်း Nandrolone ၏ဖွဲ့စည်းတစ်ခုအလွန်လူကြိုက်များဟို Steroid တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်နှင့်ကြီးမားသော Decanoate Ester တွဲဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ Nandrolone ဟော်မုန်းပထမဦးဆုံး 1960 ၌ထငျရှားနှင့်ကုန်သွယ်မှုနာမကိုအမှီ Deca Durabolin အောက်မှာ Organon အားဖြင့် 1962 အတွက်စီးပွားဖြစ်အသုံးပြုရန်တီထွင်ထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့သည်။ ထိုကာလကတည်းကမြောက်မြားစွာ Nandrolone Decanoate ဗားရှင်းစျေးကွက်ဝင်တိုက်ခဲ့ကြပေမယ့် Deca Durabolin အရှိဆုံးအသိအမှတ်ပြုနေဆဲဖြစ်သည်။ ဤသည်အထူးသ Nandrolone Phenylpropionate ဖြစ်သော Organon ရဲ့ Durabolin, ပိုင်မယ်လို့အမြဲ created ပထမဦးဆုံး Nandrolone ဝင်းမဟုတ်ခဲ့ပေ။ အဆိုပါ Phenylpropionate ဗားရှင်းအများကြီးပိုမြန်တဲ့လျော့နည်းတက်ကြွကြာချိန်နှင့်အတူသရုပ်ဆောင်နေပါတယ်နှင့် Phenylpropionate ပုံစံများကိုလူကြိုက်များနေချိန်မှာ Deca Durabolin အကြီးအကျယ် Nandrolone စျေးကွက်လွှမ်းမိုးခဲ့သည်။
Nandrolone Decanoate အားကစားသမားတိုးမြှင့်စွမ်းဆောင်ရည်တို့တွင်အများဆုံးအသုံးပြုဟို steroids တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒါဟာကောင်းစွာတစ်ဦးလွန်စွာအကျိုးရှိ Off-ရာသီအစုလိုက်အပြုံလိုက် Steroid တစ်မျိုးဖြစ်ခြင်းကြောင့်လူသိများပေမယ့်သူ့ရဲ့ကုထုံးအကြိုးခံစားခှငျ့မြားစှာအားကစားစက်ဝိုင်းထဲမှာလည်းအကြိုက်ဆုံးင်ဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်း၏ကြီးမားတဲ့ကုထုံးအကြိုးခံစားခှငျ့ငှါ, Nandrolone ဟော်မုန်းဆေးဝါးဆိုင်ရာအလေ့အကျင့်အတွက်အများဆုံးအကျိုးပြုဟို steroids တစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော်ကြောင့်ဟို Steroid တစ်မျိုးအငြင်းပွားဖွယ်ရာထိုကဲ့သို့သောအသုံးပြုမှုနှစ်နှစ်ပေါင်းများစွာကအမေရိကန်အတွက်အတော်လေးကန့်သတ်ခဲ့သည်။ အမေရိကန်ပြင်ပမှာ Deca Durabolin ဒေသများ၏ဟာ host ကိုဖုံးလွှမ်းနိုင်မကုထုံးကုသမှုအစီအစဉ်များအတွက်နည်းနည်းပိုပြီးလူကြိုက်များနေဆဲဖြစ်သည်။
ဘာဖြစ်သလဲ Nandrolone phenylpropionate(NPP)?
Nandrolone Phenylpropionate နာမည်ကျော် Nandrolone Decanoate ဒြပ်ပေါင်းများမှအလွန်ဆင်တူကြောင်းတစ်ခုဟို Steroid တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော် Nandrolone Phenylpropionate အစဉ်အဆက်စီးပွားဖြစ်ရောင်းချပထမဦးဆုံး Nandrolone ဒြပ်ပေါင်းများခဲ့ပါတယ်။ Nandrolone Phenylpropionate အဆိုပါ 1950 ရဲ့အတွင်းစင်ပေါ်ထိနှင့်နာမတော်ကိုအမှီ ပြု. Durabolin အောက်မှာ Organon အားဖြင့်စျေးကွက်မှယူဆောင်ခဲ့သည်။ Organon နာမတော်ကိုအမှီ ပြု. Deca Durabolin အောက်တွင်၎င်း၏ Decanoate ဝမ်းကွဲလွှတ်ပေးရန်မယ်လို့မကြာခင်မှာပဲ။
Nandrolone Phenylpropionate သေးငယ်တဲ့ Ester အခြေစိုက်စခန်းဟို Steroid တစ်မျိုးဖြစ်ပြီးလေ့ NPP အဖြစ်ရည်ညွှန်းသည်။ ဒီထုတ်ကုန်ကြောင့်ရရှိနိုင်မှုမှတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းထဲမှာ, ပိုကြီးတဲ့ Ester Decanoate ဗားရှင်းအဖြစ်ရေပန်းစားခဲ့ဘယ်တော့မှမတော်မူပြီ သို့သော်ခေတ်သစ်ခေတ်ထဲမှာမြေအောက်ဓာတ်ခွဲခန်းများကြောင့်တစ်စိတ်တစ်ဒေသအတွက်အသုံးပြုခြင်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုနှစ်ခုစလုံးကျေးဇူးတင်စကားအတွက်နောက်တစ်ကျော့ပြန်လာကြည့်ဖို့စတင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။
ဘာဖြစ်သလဲ Nandrolone Decanoate အမှုန့်?
နာမည်: Nandrolone Decanoate / DECA
ပွိုင့်အရည်ပျော်: 33-37 ℃
သိုလှောင် Temp: 2-8ºC
ဘာဖြစ်သလဲ Nandrolone phenylpropionate အမှုန့်?
အမည်: Nandrolone phenylpropionate / NPP
အရည်ပျော်မှတ်: 85-87 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်
သိုလှောင် Temp: -20ºC
အရောင်: အဖြူသို့မဟုတ်အဖြူ Crystal အမှုန့်
Nandrolone Decanoate အမှုန့်သောက်သုံးသော:
Deca Durabolin မကြာခဏသမျှသောထိုးသွင်းခံရဖို့ရှိသည်ပါဘူးတဲ့အလွန်နှေးကွေးသောသရုပ်ဆောင် Steroid တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ အများဆုံးကုထုံးကုသမှုထဲမှာဒြပ်ပေါင်းသာတိုင်း 2-4 ရက်သတ္တပတ် ပို. ဘုံဖြစ်ခြင်းနှင့်အတူတစ်ကြိမ် 3-4 ရက်သတ္တပတ်အုပ်ချုပ်နေသည်စီစဉ်ထားပါတယ်။ အဆိုပါခြွင်းချက်သွေးအားနည်းရောဂါ၏ကုသမှုထဲမှာပါလိမ့်မယ်; သွေးအားနည်းရောဂါ Deca Durabolin ကုသတဲ့အခါမှာပုံမှန်အားဖြင့်တစ်ပတ်လျှင်တစ်ကြိမ်အုပ်ချုပ်သည်။ လိုက်စား related မဆိုစွမ်းဆောင်ရည်များအတွက်တစ်ပတ်လျှင်တစ်ခုတည်းဆေးထိုးသင့်လျော်သည်ထက်ပိုပြီးဖြစ်လိမ့်မည်။ သို့သော်အချို့စုစုပေါင်းဆေးထိုးအသံအတိုးအကျယ်ပေါ်ခုတ်လှဲနိုင်ရန်အတွက်တစ်ပတ်လျှင်နှစ်ဦးကိုသေးငယ်တဲ့ဆေးထိုးသို့ဤထခွဲထွက်ဖို့ရှေးခယျြပါလိမ့်မယ်။
Deca Durabolin များအတွက်စံထိုးအကွာအဝေးသည်ပုံမှန်အားဖြင့်အဆိုပါ 100mg အတွက်သွေးအားနည်းရောဂါ၏ကုသမှုများအတွက်တစ်ပတ်လျှင်အခြေခံကုထုံးကုသမှုနှင့် 2-4mg သည် 100-200 ရက်သတ္တပတ်အကွာအဝေးကျရောက်ပါတယ်။ ပြန်လည်နုပျိုခြင်းနှင့်ကယ်ဆယ်ရေးရှာဖွေနေသည့်အားကစားသမားများအတွက်တစ်ပတ်လျှင် 100mg ဒဏ်ငွေ Starting Point သို့, သို့သော်အများဆုံးသီတင်းပတ်အတွင်းရလဒ်များကိုနှုန်း 200mg နှင့်အတူ ပို. ပျော်ရွှင်ကြလိမ့်မည်။ ထိုသို့သောထိုးပြန်လည်နာလန်ထူ, ကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ခံနိုင်ရည်အားလုံးတိုးမြှင့်နေကြသည်သေချာအဖြစ်အနည်းငယ်ဟိုထပ်တိုးပေးလိမ့်မယ်။ စစ်မှန်တဲ့ဟိုအကျိုးအမြတ်များအတွက်တစ်ပတ်လျှင် 300mg ပုံမှန်အားဖြင့်နိမ့်ဆုံးထိုးစဉ်းစားသည်။ အတော်များများကရေတွင်းတစ် Control အဆင့်အတွင်းပိုမိုအရေးကြီးစုံလင်ထိုးအဆင့်ဖြစ်တစ်ပတ်ကို 400mg နှင့်တွေ့လိမ့်မည်။ အတော်များများကယောက်ျားတစ်ပတ်ကို 600mg သကဲ့သို့မြင့်မားသောဆေးများသည်းခံနိုင်ပေမည်။ ဤသည်ဆိုးရွားသောသက်ရောက်မှုများအန္တရာယ်တိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်မကြာခဏတစ်ပတ်ကို 400mg အလုံအလောက်ထက်ပိုဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့အခွအေနကွဲပြားသည့်တစ်ဦးချင်းစီရလဒ်ကို dictate လိမ့်မည်။
tool ကိုတိုးမြှင့်မယ့်စွမ်းဆောင်ရည်အဖြစ်အသုံးပြုသည့်အခါ Deca Durabolin ထက်နည်း 8 ရက်သတ္တပတ်အတွက်အသုံးပြုမရသင့်တယ်။ အဆိုပါဒြပ်ပေါင်းအလွန်အမင်းနှေးကွေးသရုပ်ဆောင်ဖြစ်တယ်, တစ်ဦးချင်းစီအကျိုးကိုအသီးအနှံကိုရိတ်ရရန်အချိန်တခုတိုးချဲ့ကာလအတွက်အသုံးပြုရန်ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ ရှစ်ပတ်ကြာနိမ့်ဆုံးဖြစ်သင့်တယ်, ဒါပေမယ့်တခါရပ်စဲဝင်းနေဆဲရက်သတ္တပတ်အတော်ကြာအဘို့ကိုယ်ခန္ဓာ၌တက်ကြွစွာပါလိမ့်မည်။ 8 ရက်သတ္တပတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နိမ့်ဆုံးဖြစ်သကဲ့သို့, 10-12 ရက်သတ္တပတ်အရှိဆုံးလူတို့သညျအဘို့အလွန်လက်ခံနိုင်ဖွယ်ရှိလိမ့်မည်။ အသုံးပြုခြင်းသည်ဤအချက်အတိတ်ဆန့်နိုင်ပေမယ်ခဲအကြံပြုသည်, အများဆုံးအများကြီးပိုရှည်အမာခံစွမ်းဆောင်ရည်စက်ဝိုင်းအပြင်ဘက် 12-16 ရက်သတ္တပတ်ထက်သံသရာအကောင်အထည်ဖော်မည်မဟုတ်, ထိုကိစ္စများတွင်, တီးရွိုက်ဟော်မုန်းတစ်ခုလည်ပတ်အလွန်အမင်းအကြံပြုသည်။
အမျိုးသမီးအားကစားသမားများအတွက်မပို 50-4 ထက်ရက်သတ္တပတ်တစ်ပတ်လျှင် 6mg ပုံမှန်အားဖြင့်သည်းခံနိုင်အားလုံးပါပဲ။ အဲဒီမှာသီတင်းပတ်ထိုးနှုန်းတစ် 100mg ကိုင်တွယ်နိုင်မည်အကြောင်းသူအချို့ဖြစ်လိမ့်မယ်, ဒါပေမဲ့ထိုကဲ့သို့သောထိုးပုံမှန်အားဖြင့်အမျိုးသမီးအများစုအတွက် virilization လက္ခဏာတွေထုတ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်။ စံကုထုံးကုသမှုအစီအစဉ်များအဘို့, Deca Durabolin ပုံမှန်အားဖြင့်တိုင်း 50-100 ရက်သတ္တပတ် 3-4mg မှာအုပ်ချုပ်လိမ့်မည်။ သွေးအားနည်းရောဂါ၏ကုသမှုမှာတော့တစ်ပတ်ကို 50-100mg စံဖြစ်ပါတယ်။
Nandrolone phenylpropionate သောက်သုံးသော:
ဆေးပညာ setting ကိုခုနှစ်တွင်စံအထီး Nandrolone Phenylpropionate ဆေးများပုံမှန်ရက်သတ္တပတ်အကွာအဝေးလျင် 50-100mg ကျပါလိမ့်မယ်။ အမျိုးသမီးအသုံးပြုမှုများအတွက်သတ်မှတ်ထားသောလျှင်အများအားသတ်မှတ်ထားသောမဟုတ်ပေမယ့်ဒါဟာပုံမှန်ရက်သတ္တပတ်အကွာအဝေးလျင် 50mg ဖြစ်လိမ့်မည်။ အားလုံးနီးပါးဆေးဝါးကုသမှု setting များကိုခုနှစ်တွင် Decanoate ဗားရှင်းသတ်မှတ်ထားသောပါလိမ့်မည်အရာဖြစ်တယ်။
မည်သို့ပင်ဆေးထိုး၏စုစုပေါင်းထိုးပုံမှန်တစ်ပတ်ကိုသုံးတန်းတူထိုးသို့ခွဲထွက်သို့မဟုတ်အကောင်းဆုံးရလဒ်များကိုတစ်ခုသည်အခြားနေ့ရက်ကိုအခြေခံပေါ်မှာအထဲကစီစဉ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်သုံးပါ။ 8-12 ရက်သတ္တပတ်အများဆုံးအားကစားသမားများအတွက်အသုံးပြုမှု၏ပုံမှန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါခြွင်းချက် virilization ရှောင်ကြဉ်ခံရဖို့ပါလျှင်တစ်ပတ်ကို 4mg ထက်မပို 6-50 ရက်သတ္တပတ်များအတွက် Steroid တစ်မျိုးသုံးပါနဲ့ပုံမှန်အားဖြင့်တစ်ဦးထိုးမှာစခွေငျးငှါအဘယ်သူသည်အမျိုးသမီးအားကစားသမားဖြစ်ပါတယ်။
အားသာချက် Nandrolone အမှုန့်ကိုဝယ်ကြလော့ AAS ထံမှ Nandrolone အမှုန့်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း:
ကျွန်ုပ်တို့သည်အမှုန့်များ၏ ၉၈% အမြင့်ဆုံးသန့်ရှင်းမှုကိုအာမခံသည်။ လက်လီအရောင်းဆိုင်မဟုတ်သောထုတ်လုပ်သူဖြစ်သောကြောင့်ဤကုန်ပစ္စည်းအားလုံးသည်စျေးအနိမ့်ဆုံးနှင့်ရောင်းချသည်။
၂။ အသုံးပြုသူ၏တုံ့ပြန်ချက်များကိုတန်ဖိုးထားပါမည်။ သင်၏ ၀ န်ဆောင်မှုတိုးတက်စေရန်သင်၏အကြံပြုချက်များသည်ကျွန်ုပ်တို့အားလမ်းညွှန်ပေးမည်ဖြစ်ပြီးဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်အားလုံးကိုဖြည့်ဆည်းရန်မှာကျွန်ုပ်တို့၏တာ ၀ န်ဖြစ်သည်။
၃။ AAS သည် steroid ကုန်ကြမ်းများအားအကောင်းဆုံးအရည်အသွေးရှိသောကုန်ပစ္စည်းများ၊ ကောင်းမွန်သော ၀ န်ဆောင်မှုနှင့်အတူလျင်မြန်စွာသယ်ယူပို့ဆောင်နိုင်သည့်ကုန်ကြမ်းပေးသွင်းသူတစ် ဦး ဖြစ်သည်။
Tags: Nandrolone Decanoate အမှုန့်ကိုဝယ်, Nandrolone Decanoate အမှုန့်
22915 Views စာ
ကာယဗလများအတွက် testosterone Undecanoate အမှုန့်	Lorcaserin HCL အမှုန့်နှင့်ပတ်သက်ပြီးသင်ကသိရန်လိုအပ်သည် 20 အရေးအပါဆုံးအရာမြား